राजपालाई भारतको भाजपाले दियो यस्तो सुझाव, के गर्छन् अब राजपा नेताहरु ? - Deshko News Deshko News राजपालाई भारतको भाजपाले दियो यस्तो सुझाव, के गर्छन् अब राजपा नेताहरु ? - Deshko News
राजपालाई भारतको भाजपाले दियो यस्तो सुझाव, के गर्छन् अब राजपा नेताहरु ?
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले नेपालको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई २ असोजको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन सुझाब दिएको छ । उसले मधेस समस्या समाधानको प्रयास गर्न सत्तारुढसहित प्रमुख दलहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुँदा नेपालको स्थायित्वमा सहयोग पुर्याउने र त्यो भारतको दीर्घकालीन हितमा पनि हुने उसले बताएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
‘हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले नजिकको शुभेच्छुकका नाताले मधेसीदेखि सबैसँग भनेको छ कि स्थानीय तहले अधिकार पाउनुपर्छ, यसका लागि मधेसी दलहरू पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ,’ भारतीय जनता पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारीले भने ।